Ihanta Andriamandranto, Christine Razanamahasoa:MIDONGY FANANAM-BAHOAKA -
AccueilRaharaham-pirenenaIhanta Andriamandranto, Christine Razanamahasoa:MIDONGY FANANAM-BAHOAKA
22/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tonga eny anivon’ny Fitsarana mihitsy ny raharaha noho ny fibodoan’ny minisitry ny Fambolena teo aloha nandritra ny fitondrana HAT, Ihanta Randriamandranto, ny fiara Toyota Land Cruiser laharana 8479 TAE. Ny faha-21 Novambra 2011 no notendren’ny praiminisitra Omer Beriziky ho ministry ny Fambolena ity legalista avy amin’ny ankolafy Ravalomanana ity, izany hoe, dimy taona lasa izay. Nogiazany hatramin’izao io fiaran’ny minisitera io ary tsy mieritreritra ny hamerina izany mihitsy ity legalista teo aloha ity. Nandefa vadintany naka ny fiara tany an-tranony ny minisitera kanefa fandrahonana no nahazo ity vadintany ity ka voatery nitondra ny raharaha teny amin’ny Fitsarana ny minisiteran’ny Fambolena. Naka mpisolovava mihitsy moa ny tenany hiady hitazonany izany fiaram-bahoaka izany.
Fa mbola mipetraka ao amin’ny tranom-panjakana etsy Ampahibe ihany koa ny depiote MAPAR, Christine Razanamahasoa, roa taona aty aorian’ny tsy naha minisitry ny Fitsarana azy intsony. Mbola endrika fibodoana fananam-panjakana koa izany na inona fanazavana azo aroso. Nahavita niteny ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ho “sauvage” anefa ity minisitry ny Fitsarana HAT ity.
Rahoviana ny mpanao politika eto amintsika vao mba hanana izany “sens de l’honneur” izany? Inona no antony tsy maintsy hibodoana fananam-bahoaka rehefa tsy manana andraikitra ara-panjakana intsony? Ny sasany aza moa nobatainy hatramin’ny “salon” mihitsy rehefa niala teo amin’ny toerany, tsy lazaina intsony ny tsy firaharahiana ireny fitaovam-panjakana ireny (fiarakodia, trano, sns) ary ny tena mampalahelo dia avadika resaka politika daholo ny zavatra rehetra kanefa fitakiana fananam-bahoaka tsy ananan’ny tena fahefana intsony no atao. Tokony hoe fihetsika laojika be tsy ilana vadintany na taratasy fampilazana izany mamerina fiarakodiam-panjakana na miala amina tranom-panjakana izany rehefa tsy manana andraikitra ara-panjakana intsony. Fampitaovana ho fanamorana ny fanatanterahana ny andraikitra no antony nanomezan’ny fanjakana ireny tombontsoa maro samihafa ireny fa tsy ho fananana manokana velively akory.
Nosokafana omaly tamin’ny fomba ôfisialy ny “Salon des mines, de pétrole et de l’équipement” andiany faharoa. Hetsika tanterahina eny amin’ny Mining Business Center eny Ivato, ny 13-15 avrily izao. Araka izany, tonga nanokatra izany ny ...Tohiny